XOG: Waa Kuwan Shanta Arimood Ee Ay Man United u Baahan Tahay In Ay Samayso Si Ay Xili Ciyaareedka Cusub Koobab Ugu Guulaysan Karto. - Gool24.Net
XOG: Waa Kuwan Shanta Arimood Ee Ay Man United u Baahan Tahay In Ay Samayso Si Ay Xili Ciyaareedka Cusub Koobab Ugu Guulaysan Karto.
August 19, 2020 Abdirahman Camir
Kooxda Manchester United ayaa guul darro 2-1 ah kala kulantay kooxda reer Spain ee Sevilla kulanka kamid ahaa Afar dhamaadka tartanka Europa League, guul daradaasi waxay United ka dhigtay in Xilli Ciyaareedkii seddexaad oo xariir ah ay ku dhameystaan Iyagoo aan wax koob ah qaadin waana arin murugo weyn ku ah tageerayaasha kooxda.
Inkastoo guul daradaasi lagu ee deyn karay inay ku lug lahaayeen ciyaaryahanada kooxda Iyaga oo fursado badan ka qasaariyay kooxdooda hadana way awoodi kari waayeen in ay kooxdu u soo baxdo Final tartanka Europa League.
Inkastoo Ciyaaryahanada kooxda ay dadaaleen oo ay kooxdooda keenen kaal maha ugu dambeeya ee koobka Europe League, FA Cup iyo Carabao Cup, hadana Man United ayaa ku dhameysatay kalinta seddexaad horyaalka Premier League xilli Ciyaareedkii dhamaaday taas oo kooxda u suurta galin doonta in ay ka qeyb galaan Tartanka xiisaha badan ee Champions League.
Kadib seddex xilli ciyaareed oo koob la,aan ah, taageeyaasha kooxda United ayaa dareensan in kooxda u baahantahay is bedel dhab ah si Xilli Ciyaareedyada soo socda ay ugu guuleysato koobab waa hadii wax laga qabto meelaha ay dhibaatada ka heysato kooxdooda.
Haddaba waxaanu halkan idiinku soo gudbinaynaa shan arimood oo ay Man United u baahan tahay in ay samayso si ay xili ciyaareedka cusub koobab ugu guulaysan karaan halkan ayaanad kaga bogan kartaa.
1- Man United Waa in ay iska fasaxdaa De Gea Oo Ay Badalkiisa Ka dhigtaa Henderson.
Shaki kuma jiro inuu ahaa halyeey wax badan usoo qabtay kooxda sagaalkii sano ee uu joogay Old Trafford isagoo ku guuleystay 4-jeer abaalmarinta Xiddiga ugu Fiicnaa kooxda xilli ciyaareedyadii la soo dhaafay, majiro ciyaaryahan sidaasi sameeyay taarikhda kooxda.
Sanadihii ugu dambeeyay Goolhayahan ayaa sameeyay hoos u dhac weyn iyadoo ay badatay qaladaadkiisa oo mar waliba lagu cinqaabo kooxda xitaa waxaa lagu eedeeyay inuu ka dambeeyay guuldaradii kooxdiisa kasoo gaadhay kooxda Chelsea koobka FA Cup-ka wareegiisa Semi-Finalka.
De-Gea ayaa noqday mid aan la aamini karin xili ciyaareed kale iyada oo Man United lacag ku qasaarinin goolhaye kale waxaa loo baahanyahay in ay United fursad siiso Goolhayaheeda Da’yarka ah ee Dean Henderson.
Henderson oo 23 jir ah ayaa amaah ku qaatay labadii xilli ciyaareed ee u dambeysay kooxda Sheffield United wuxuuna muujiyay xilli ciyaareedkii 2019/20 ee dhamaaday inuu u qalmo safka koowaad ee kooxda United Waa waqtigii loo baahnaa inuu Solskjaer ka dhigto goolhayahiisa koowaad.
2-Man United Waxay u baahantahay Ciyaaryahano Sida Bruno Fernandes Ah:
Inta badan way adag tahay in la helo hal saxiix oo bedali kara niyada ama dareenka koox aad u niyad jabsan, laakiin dhabtii Bruno Fernandes wuxuu noqday ciyaaryahan ay ku niyad qabowsadeen tageerayaasha kooxda United kuwaas oo aad uga niyad jabsanaa kooxdooda inta uusan xiddigan imaanin kooxda bishii January ee horaantii sanadkan.
Wuxuu bedelay dareenka kooxda laakiin si loosii hormariyo niyada kooxda, United waxay ubaahantahay ciyaartoy lamid ah Bruno hadii la helo ciyaaryahano lamid xiddiga reer Portugal, United Markaas waxay noqon doontaa kooxda aad u niyad sareysa oo dhisan.
3-Man United Waa in ay Xalisaa Arinta Paul Pogba:
Mid ka mid ah ciyaartoyga sida dhabta ah uga faa’ideystay imaatinka Bruno Fernandes ayaa ah Paul Pogba kaasoo ku raaxeysanayay kubaddiisa United inta uu xiddigan joogay kooxda.
Si kastaba ha noqotee iyada oo ay jiraan shaki weyn oo ku aadan mustaqbalka qadka dhexe ee reer France madaama uu galaayo sannadkiisii ugu dambeeya ee Old Trafford laakiin kooxda United ayaa heysato fursad ay xiddigan ugu sii heyso garoonka Old Trafford.
Kooxda Man United ayaa looga baahanyahay in Xal rasmi ah ka gaadho Pogba iyada oo laba wado ay u furantahay in ay iska iibiso ama in ay heshiisa cusub ka saxiixato si Xiddigan Arintiisa ay dhanac ugu dhacdo kooxda.
4-Man United Waxay U baahantahay Saxiixa daafaca dhexe oo heer-caalami ah:
Harry Maguire ayaa horumar ka sameeyay United dhanka daafaca laakiin Xiddigan kuma jiro caab ciyaareedkii looga baahnaa waqti xaadirkaan.
Xiddigan ayaa laga soo bixiyay qarash dhan ​​80 milyan ginni taas oo aad qaali u ah waxaana laga filayay Daafac kooxda ka xaqabtiri kara dhanka daafaca laakiin weli taasi run maysan noqon kadib markii uu fadeexad dhex galay kulankii Sevilla.
United ayaa u baahan daafac dhexe oo heer caalami ah kaas oo lagu lamaaneen karro Harry Maguire hadii taas macquul noqoto Kooxda waxay noqonta koox aad u sareysa oo koobab u tartami karta xili ciyaareedka cusub.
5-Man United Waa In Ay la soo wareegto Jadon Sancho:
Kulankii guul darada kasoo gaadhay kooxda Sevilla ee Tartanka Europa League, Man United ayaa laga dheehan karay inay u baahantahay weeraryahano cusub, taageerayasha kooxda ayaa doonaya in kooxda ay lasoo wareegto Weeraryahan No.9 ka ah.
Man United waxay haddaba haysataa Marcus Rashford, Anthony Martial iyo Mason Greenwood laakiin waxay xili ciyaareedkan awoodi kari waayeen in ay wax koobab ah kooxda u keenaan taas oo maamulka United ku qasbaysa in ay weerar yahan cusub oo tayo leh la soo saxiixdaan.
Man United ayaa u baahan in ay safka weerarka kooxdeeda soo xoojiso haddii ay doonayso in ay xili ciyaareedka cusub la tartami karto Liverpool iyo Man City oo ahaa labada kooxood ee Premier League ugu awooda badnaa saddexdii xili ciyaareed ee ugu danbeeyay.
Degea inlabadalo pogpana laxaliyo wanqabaa lkn Sancho Kuma habona united sanqabo